पशुपतिनाथको ‘कलिको मुर्ति’ निस्किएपछि संसार ध्वस्त हुने धार्मिक विश्वास : के हो सत्यता ? « Himal Post | Online News Revolution
पशुपतिनाथको ‘कलिको मुर्ति’ निस्किएपछि संसार ध्वस्त हुने धार्मिक विश्वास : के हो सत्यता ?
प्रकाशित मिति : २०७४, २१ जेष्ठ ०९:१७
एजेन्सी – पूर्वीय दर्शन अन्तर्गत हिन्दू र्म शास्त्रमा लेखिए अनुसार ब्रम्हाण्डमा चार ओटा युगहरु हुन्छन्, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग र कलि युग । हिन्दु शास्त्रहरुका अनुसार अहिलेको यो सयम कलियुग अन्तर्गतको कालखण्ड हो , जुन अन्तिम पनि हो ।
पशुपतिमा कलिको मुर्ति र संसार ध्वस्त हुने विश्वास !
तर पशुपति जाने जो कोही पनि एक पटक विरुपाक्षको मुर्ति हेर्न पुग्छन् र कलि बाहिर निस्किरहेको बताउँछन् । श्रुतिहरुका अनुसार यो मुर्र्ति जमिनको सतहबाट विस्तारै माथि सर्दै आइरहेको छ । जब यो मूर्ती जमिनबाट पूर्णरुपमा माथि आउँछ त्यसपछि यो संसारको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।
अर्थात यो मूर्ति पूर्णरुपमा बाहिर निस्किएपछि कलियुगको अन्य हुने विश्वास गरिन्छ । कलियुगको समाप्तिपछि यो मुर्ति फेरि जमिनमुनि पुरिने र निस्कदै जाने विश्वास गरिएको छ ।